Allegra vs Allegra-D: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय घरपालुवा जनावर समाचार स्वास्थ्य कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण समुदाय, कम्पनी औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एल्ग्रा बनाम एलेग्रा-डी: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
एल्ग्रा बनाम एलेग्रा-डी: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
तपाईंको स्थानीय फार्मेसीमा एलर्जी औषधिको लागि किनमेल गर्दा तपाईं एलेग्रा (फेक्सोफेनाडाइन) को लागी पुग्न सक्नुहुनेछ। एल्ग्राले लगातार एलर्जी लक्षणहरू छुटकारा दिन्छ जस्तै छींक र खुजली। यो लोकप्रिय ओभर-द-काउन्टर (OTC) विकल्प हो यदि तपाईं द्रुत राहत खोज्दै हुनुहुन्छ भने। तर तपाईले त्यहाँ दुई फरक संस्करणहरू देख्न सक्नुहुन्छ: एलेग्रा र एलेग्रा-डी।
एलेग्रा, वा फेक्सोफेनाडाइन, एक एफडीए-अनुमोदित एन्टीहिस्टामाइन हो जुन मौसमी एलर्जीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। अधिक विशेष रूपमा, फेक्सोफेनाडाइन एक हो दोस्रो पुस्ता antihistamine यसले छींकने, बग्ने नाक, र खुजली, पानी आँखा जस्ता लक्षणहरु लाई राहत दिन सक्छ। यसले रासायनिक हिस्टामाइनलाई हिस्टामाइन रिसेप्टर्सको बन्धनबाट रोक्न कार्य गर्दछ, जसले एलर्जी प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्दछ।
Allegra र Allegra-D बीचको भिन्नता र समानताहरूको बारेमा अधिक जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
एलेग्रा र एलेग्रा-डी बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा एकै छन् किनकि त्यहाँ केवल एक-अक्षरको भिन्नता छ, यद्यपि, एलेग्राको दुबै संस्करणहरूमा फेक्सोफेनाडाइन समावेश गरिएको छ, तिनीहरूसँग एक महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ: एलेग्रा-डीमा स्यूडोफेड्रिन भनिने एक डिकन्जेस्टन्ट हुन्छ। स्यूडोएफेड्रिन अक्सर नाकको भीडलाई कम गर्न, वा भरपर्दो नाक, एलर्जी वा सामान्य चिसोसँग सम्बन्धित छ।
एलेग्रा-डी (एल्ग्रा-डी के हो?) १२ घण्टा र २ 24 घण्टा ट्याब्लेटमा आउँदछ। १२ घण्टा गठनमा x० मिलीग्राम फेक्सोफेनाडाइन र १२० मिलीग्राम स्यूडोफेड्रिन हुन्छ जबकि २-घण्टाको फर्म्युलेसनमा १x० मिलीग्राम फेक्सोफेनाडाइन र २ 24० मिलीग्राम स्यूडोफेड्रिन हुन्छ। एल्ग्रा-डी केवल १२ बर्ष वा माथिका उमेर र बच्चाहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ।
नियमित एलेग्रा (एलेग्रा के हो?) मौखिक ट्याब्लेट, मौखिक-विच्छेदन ट्याब्लेट, र तरल निलम्बनमा आउँदछ। १२ घण्टाको ट्याब्लेटले mg० मिलीग्राम फेक्सोफेनाडाइन समावेश गर्दछ जबकि २-घण्टा ट्याब्लेटमा १x० मिलीग्राम फेक्सोफेनाडाइन हुन्छ। वयस्क र बच्चाहरू जो १२ बर्ष र माथिका छन् एल्ग्रा ट्याब्लेटहरू लिन सक्दछन्, तर उपचारको लागि निम्न-शक्ति संस्करणहरू उपलब्ध छन्। बच्चाहरूमा एलर्जी राइनाइटिस २ देखि ११ वर्ष पुरानो।
Allegra र Allegra-D बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एन्टीहिस्टामाइन एन्टीहिस्टामाइन
फेक्सोफेनाडाइन फेक्सोफेनाडाइन र स्यूडोफेड्रिन
मौखिक रूपमा ट्याब्लेट विच्छेदन गर्दै
मौखिक तरल मौखिक ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज
मानक खुराक के हो? Mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट: दिनहुँ दुई पटक मुखबाट एक ट्याब्लेट
Mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट: दिनहुँ दुई पटक मुखबाट एक ट्याब्लेट
१ mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट: दिनहुँ एक पटक मुखबाट एक ट्याब्लेट १२-घण्टा ट्याब्लेट: एक ट्याब्लेट दिनहुँ दुई पटक मुखले
२--घण्टा ट्याब्लेट: दिनहुँ एक पटक मुखबाट एक ट्याब्लेट
सर्तहरू एलेग्रा र एलेग्रा-डी द्वारा उपचार गरिएको
एल्ग्रा र एलेग्रा-डी एलर्जी औषधीहरू हुन् जुन मौसमी एलर्जीको राइनाइटिसलाई उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन वयस्कहरू र बच्चाहरूमा पनि पराग ज्वरोको रूपमा चिनिन्छ। तिनीहरू उपयोगी औषधिहरू हुन सक्छन् यदि तपाईं पराग वा धूलोकोट जस्तो एलर्जीको संपर्कमा पछि लक्षणहरू अनुभव गर्नुभयो।
एक औसत रक्त शर्करा स्तर के हो
एलेग्रा पित्ती, वा छालाको उपचार गर्न पनि अनुमोदित छ। धेरै व्यक्तिहरूले केही खाद्यान्न वा ड्रग्सबाट एलर्जीको प्रतिक्रिया अनुभव गरेपछि पित्ताहरूमा घुसिए। एलेग्राले months महिना भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा जीर्ण छालाको उपचार गर्न सक्छ।
सर्त एल्लेग्रा Allegra-D
मौसमी एलर्जी राइनाइटिस हो हो
पित्तीहरू हो हैन
के Allegra वा Allegra-D अधिक प्रभावी छ?
दुबै एल्ग्रा र एलेग्रा-डी एलर्जी लक्षणहरूको उपचारको लागि प्रभावकारी औषधीहरू हुन्। यद्यपि एलेग्रा-डी थपिएको स्यूडोफेड्रिनको कारण भीड र साइनसको दबाबबाट छुटकारा पाउनका लागि उपयुक्त छ। हालै, त्यहाँ एलेग्रा र एलेग्रा-डी तुलना गर्ने कुनै पनि टु-हेड ट्रायलहरू छैनन्।
बेनाड्रिल (डिफेनहाइड्रामिन) जस्ता पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्सको तुलनामा, एलेग्राको कम सेडिडेट साइड इफेक्टहरू छन्। यस सन्दर्भमा, Allegra हुन सक्छ सुरक्षित मानिन्छ पुरानो antihistamines भन्दा।
एक अनुसार समीक्षा दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्सको, एलेग्रा एलर्जीक राइनाइटिसको उपचारको लागि Zyrtec (cetirizine) र Claritin (loratadine) जस्ता औषधिहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तर, Zyrtec अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ पित्ती उपचार को लागी Allegra भन्दा।
को सर्वश्रेष्ठ मौसमी एलर्जी औषधि तपाई र तपाइँको विशेष लक्षणहरूको लागि उत्तम कार्य गर्दछ। तपाईको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् तपाईको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी एलर्जी औषधि पत्ता लगाउन। एक औषधि तपाईंको समग्र स्वास्थ्य र तपाईंले लिनु भएको अन्य लागूपदार्थमा निर्भर गर्दछ।
कभरेज र लागत तुलना Allegra बनाम Allegra-D
एलेग्रा र एलेग्रा-डी ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधि हुन् जुन सामान्यतया मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले ढाक्दैन। एलेग्राको खुद्रा लागत प्राय: $ १ to देखि $ ० को आसपास हुन्छ, ट्याब्लेटको शक्ति र मात्रामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंसँग प्रिस्क्रिप्शन छ भने, तपाईं क्रमशः $ १० र $ १ for मा जेनेरिक एलेग्रा वा एल्लेग्रा-डी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्थानीय फार्मेसीमा कति बचत गर्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउन सिंगलकेयर खोजी उपकरण जाँच गर्नुहोस्।
तपाइँ कसरी toenail कवक छिटो बाट छुटकारा पाउनुहुन्छ
मानक खुराक दैनिक १ 180० मिलीग्राम ट्याब्लेट १ mg० मिलीग्राम - २0० मिलीग्राम ट्याब्लेट एक पटक दैनिक
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 1– $ 11 $ १– $।
एकलकेयर लागत + + + $ १ + +
एलेग्रा बनाम एलेग्रा-डीको साझा साइड इफेक्टहरू
Allegra र Allegra-D को धेरै सामान्य साइड इफेक्ट मा टाउको दुखाइ, मतली, निन्द्रा, अपच, र माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमण। एल्लेग्राले पीडादायी मासिक पेटको (डिस्मेनोरिया) निम्त्याउन सक्छ।
Allegra-D लाई निर्दिष्ट साइड इफेक्टमा अनिद्रा, सुख्खा मुख, मुटुको धड्कन, र घबराहट समावेश छ। यी अद्वितीय साइड इफेक्टहरू एल्लेग्रा-डीमा स्यूडोफेड्रिनको कारणले हुन्छ।
एलेग्राको गम्भीर साइड इफेक्टहरू विरलै मात्र हुन् तर सामान्यतया ड्रगमा रहेका सामग्रीहरूमा संवेदनशीलता प्रतिक्रिया समावेश गर्दछ। एलेग्रा-डीमा रहेको स्यूडोएफेड्रिनले गम्भीर धडपड वा उच्च रक्तचाप निम्त्याउन सक्छ, जसले हड्डी भित्रिने समस्याहरू भएकाहरूमा चिकित्सा ध्यान दिन सक्छ।
एल्लेग्रा एलेग्रा डी
टाउको दुखाई हो १०..6% हो १%%
अनिद्रा हैन - हो १%%
माथिल्लो श्वसन पथ संक्रमण हो 2.२% हो १.4%
मतली हो १.6% हो .4..4%
डिसमेनोरिया हो १.%% हैन -
तन्द्रा हो १.3% हो *
अपच हो १.3% हो २.8%
सुख्खा मुख हैन - हो २.8%
धमकी हैन - हो १.9%
नर्भस हैन - हो १.4%
यो देखा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावहरूको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। साइड इफेक्टको बारेमा अधिक जान्नको लागि कृपया तपाइँको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
स्रोत: डेलीमेड ( एल्लेग्रा ), डेलीमेड ( Allegra-D )
एल्ग्रा बनाम एल्ग्रा-डीको ड्रग अन्तर्क्रिया
एलिग्रा वा एलेग्रा-डी लिनु अघि वा पछि दुई घण्टा भित्र एन्टासिडहरू त्याग्न सकिन्छ। टम्स (क्याल्शियम कार्बोनेट) वा अल्का-सेल्टजर (सोडियम बाइकार्बोनेट) जस्ता एन्ट्यासीडहरूले फेक्सोफेनाडाइनको शोषण घटाउन सक्छन् र यसको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछन्। अंगूरको रस फेक्सोफेनाडाइनमा उस्तै असर गर्दछ र एलेग्रा वा एलेग्रा-डी लिने बेला पनि बेवास्ता गर्नुपर्दछ।
कोबिसिस्ट्याट जस्ता एचआईभी औषधीहरूले फेक्सोफेनाडाइनको रगतमा वृद्धि गर्न सक्दछन्। कोबिसिस्टेट वा एन्टिभाइरल्सको साथ एलेग्रा लिनुले बढ्दो साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तो कि तन्द्रा वा टाउको दुखाइ। अन्य एन्टीहिस्टामाइन्स Allegra साथ लिनु हुँदैन किनभने तिनीहरूले खराब साइड इफेक्ट पनि निम्त्याउन सक्छ।
ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्स वा मोनोमाइन अक्सिडेज (एमएओ) अवरोध लिनेहरूको बेला एलेग्रा-डीबाट अलग रहनु पर्छ। एलेग्रा-डीमा रहेको स्यूडोएफेड्रिनले यी अन्य औषधीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ र उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) वा अनियमित दिलको धड्कन (एरिथिमिया) को बढि जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
औषधि औषधि वर्ग एल्लेग्रा एलेग्रा डी
सोडियम बाइकार्बोनेट एन्ट्यासिड हो हो
नाडोलोल बीटा-ब्लकर हो हो
रिटोनाभिर एन्टिवाइरल हो हो
Desloratadine एन्टीहिस्टामाइन हो हो
पिओग्लिटाजोन एन्टिडायबेटिक हो हो
अंगूरको रस खाना हो हो
रिफाम्पिन एन्टिमाइकोब्याक्टेरियल हो हो
पोसाकोनाजोल एन्टिफंगल हो हो
Clomipramine Tricyclic antidepressant हैन हो
रिजर्पाइन एन्टिहाइपरपोर्टिभ हैन हो
Phenelzine MAO अवरोधकर्ता हैन हो
Allegra र Allegra-D को चेतावनी
एलेग्रा र एलेग्रा-डी औषधिको सक्रिय अवयवहरूमा ज्ञात अतिसंवेदनशीलता भएकाहरूबाट टाढा रहनु पर्छ। अन्यथा, यी औषधीहरूले एलर्जीको प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ जस्तै गम्भीर दाग वा सास फेर्न समस्या (एनाफिलैक्सिस)।
एलेग्रा र एलेग्रा-डी व्यक्तिहरूमा टाढा रहनु पर्छ मृगौला रोग । फेक्सोफेनाडाइन किडनी मार्फत शरीरबाट सफा भएकोले, बदलिएको मिर्गौला समारोहले विषाक्तता र प्रतिकूल प्रभावहरूको बढ्दो जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
उच्च रक्तचाप र हृदय रोग भएकाहरूमा Allegra-D को प्रयोग बेवास्ता गर्न वा निगरानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। स्यूडोफेड्रिन रक्तस्राव संकुचन गरेर भीड कम गर्न काम गर्दछ। यस प्रभावले हृदय रोग बाट जटिलताको खतरा बढाउन सक्छ।
Allegra वा Allegra-D लिनु अघि अन्य सावधानीहरूको लागि सावधान हुनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
एलेग्रा बनाम Allegra-D को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
एलेग्रा फेक्सोफेनाडाइनको ब्रान्ड नाम हो। यो वयस्कहरू र बच्चाहरूमा हेई ज्वरो (एलर्जिक राइनाइटिस) र पित्तीहरू (छाला) को उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। एल्ग्रा काउन्टरमा फेला पार्न सकिन्छ र ट्याब्लेट र तरल सूत्रमा उपलब्ध छ।
Allegra-D के हो?
एलेग्रा-डीमा फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड र स्यूडोफेड्रिन हुन्छ। यो काउन्टरमा किन्न सकिन्छ एलर्जीका लक्षणहरू जस्तो कि बहेको नाक, पानी आँखा, र नाक को भीड बाट राहत पाउन। Allegra-D १२-घण्टा र २-घण्टा मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ।
के एल्लेग्रा र एलेग्रा-डी समान छन्?
एलेग्रा र एलेग्रा-डी दुबैले फेक्सोफेनाडाइन एचसीएल समावेश गर्दछ। यद्यपि तिनीहरू समान औषधि होइनन्। Allegra-D ले pseudoephedrine नामको अर्को सक्रिय संघटक समावेश गर्दछ।
तपाइँ कहिले सम्म accutane लिनु पर्छ?
Allegra वा Allegra-D राम्रो छ?
दुबै एलिग्रा र एलेग्रा-डीले सामान्य एलर्जीका लक्षणहरूलाई कम गर्नका लागि काम गर्दछन्। किनकि एल्लेग्रा-डीमा थपिएको डिon्जेन्जेन्ट हुन्छ, यो केही लक्षणहरू जस्तै कन्जेशन वा भरिएको नाकको लागि उत्तम हो।
के म गर्भवती भएको बेला एल्ग्रा वा एल्लेग्रा-डी प्रयोग गर्न सक्छु?
एल्ग्रा गर्भावस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि लाभहरू भ्रुणको लागि सम्भावित जोखिमहरू भन्दा बढी छन्। तसर्थ, यी औषधीहरू तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको अनुमोदनको साथ मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। गर्भावस्थाको अवधिमा Allegra वा Allegra-D प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
म रक्सीको साथ Allegra वा Allegra-D प्रयोग गर्न सक्छु?
जबकि कहिलेकाँही रक्सीको सेवन ठीक हुन सक्छ जब दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन लिन्छ, यो सिफारिस गरिदैन। रक्सीले साइड इफेक्ट्स हुन सक्छ जस्तै चक्कर आउँछ वा निन्द्रा, जो एक antihistamine संग तीव्र गर्न सकिन्छ ।
Allegra-D ले तपाईंलाई निन्द्रा बनाउँछ?
एलेग्रा-डी मा फेक्सोफेनाडाइन हुन्छ, जो सुन्द्री पैदा गर्ने सम्भाव्यता हो। यद्यपि यो औषधिले स्यूडोफेड्रिन पनि समावेश गर्दछ, जसले केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) मा उत्तेजक प्रभाव पार्छ। Allegra-D निन्द्रा वा निन्द्रामा समस्या हुन सक्छ औषधीमा तपाइँको व्यक्तिगत प्रतिक्रियाको आधारमा। पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्सको तुलनामा, एलेग्रा-डीले कम तन्द्रा उत्पन्न गर्दछ।
के Allegra-D एक over-the-काउन्टर औषधि छ?
Allegra-D एक ओभर-दि-काउन्टर औषधि हो जुन प्रिस्क्रिप्शन बिना खरीद गर्न सकिन्छ। संघीय कानून अनुसार, Allegra-D फार्मेसी मा काउन्टर पछाडि राखिएको छ। तपाईंलाई यो खरीद गर्न आईडी चाहिन सक्छ र तपाईंले तोकेको दिनमा खरीद गर्न सक्नुहुने सीमा हुनेछ।
के मैले राति वा बिहान एलिग्रा लिनु पर्छ?
एलिग्रा रातमा वा बिहान लिन सकिन्छ, दिनको कुन समयमा तपाईले सबैभन्दा खराब लक्षणहरू अनुभव गर्नु हुन्छ। यदि तपाईं रातमा वा बिहान सब भन्दा खराब एलर्जी लक्षणहरू अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाईं साँझ Allegra लिन कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले दिनभरि खराब लक्षणहरू अनुभव गर्नुभयो भने, तपाईं यसलाई बिहान लिन सक्नुहुन्छ। एलेग्रा २ 24 घण्टाको ट्याब्लेटमा आउँदछ जुन सम्पूर्ण दिनसम्म रहन्छ।
IVF कति खर्च हुन्छ?
50 mg vyvanse कति लामो हुन्छ?
तापमान को लागी सामान्य दायरा के हो?
यदि मसँग कुनै स्वास्थ्य बीमा छैन भने म कहाँ जान सक्छु?
म कब्जियत संग मद्दत गर्न के लिन सक्छु
घर मा खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउने तरिका
इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लागी कस्तो प्रकारको डाक्टरलाई हेर्ने